Inyocha DataSift Martech Zone
Wednesday, November 16, 2011 Na Tọzdee, Septemba 25, 2012 Douglas Karr
DataSift bụ ezigbo oge na-elekọta mmadụ mgbasa ozi nzacha data nzacha na ọ bụ otu n'ime ụlọ ọrụ abụọ na ụwa nwere ikikere ime Twitter data azụmahịa dị maka ebumnuche na-enweghị ngosi, na-enye ndị ọrụ ohere iji chọọ posts iji metadata dị na tweets. Ma ọ na-eme ya na ngosipụta mara mma yana yana Mmepụta njikwa ma sie ike API (Ọbá akwụkwọ ndị ahịa dịnụ) nwere asụsụ nyocha nke ya.
ọ bụla "HTC, Nokia, RIM, Apple, Samsung, Sony"
DataSift bidoro site na Nick Halstead iji nyere ndị otu aka imeziwanye nghọta ha na iji Social Media. DataSift lekwasiri anya na imeputa onodu uzu nke nzacha data na nzacha ohuru na Big Data. DataSift malitere ndụ ya dị ka mgbatị site na TweetMeme, Ọrụ Twitter na-ewu ewu nke ukwuu. Mgbe ọ hụrụ ọhụụ ngwa ngwa Social Media metụtara otu, Nick Halstead wee mepụta ikpo okwu iji nyere ụlọ ọrụ aka ijikwa Social Media na ị nweta isi ihe ọmụma dị na data ahụ.
DataSift anaghị ejedebe ọchụchọ dabere na isi okwu ma na-enye ụlọ ọrụ nha ọ bụla ohere ịkọwapụta ihe nzacha dị mgbagwoju anya, gụnyere ọnọdụ, okike, mmetụta, asụsụ, yana ọbụlagodi mmetụta dabere na akara Klout, iji nye nghọta na nyocha doro anya. Teknụzụ dataSift nwekwara ike itinye usoro nzacha data na ọdịnaya ọ bụla nke nọchiri anya dịka njikọ n'ime post ahụ n'onwe ya, na-enye ụlọ ọrụ nkọwa zuru oke.
Mgbasa mgbasa ozi emeela ka azụmahịa dị ngwa ngwa taa. Ndị ụlọ ọrụ enweghị okomoko iji dọọ ọtụtụ narị nde iyi data kwa ụbọchị, naanị na-ekwupụta ihe kwesịrị ekwesị. Ihe ha choro bu inweta nnabata nke oge nke n’etu ahia ha - si nye ha ohere ichoputa ma megharia ihe ndi n’eme omume, mmekorita ndi mmadu, ihe ndi ahia - n’ikpeazu, gbochie nsogbu obula. O juru anyị anya na ọchịchọ maka ikpo okwu anyị na US ma na-emeghe ọfịs iji gboo ọchịchọ a. Onye guzobere, Nick Halstead.
Ngwa ndị nwere ike ịnweta DataSift fọrọ nke nta ka ọ bụrụ njedebe, gụnyere ịzụ ahịa, mgbasa ozi na ọrụ ndị ahịa, n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ. DataSift na-egosi usoro ọnụahịa igwe ojii nwere ịkwụ ụgwọ ma ọ bụ ndenye aha, dabara adaba maka ụlọ ọrụ ma ọ bụ ndị otu ọ bụla.
Tags: datasiftnyocha mgbasa ozi mmekọrịtammekọrịta mmadụ na ibe ya